घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू आर्थर मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैभन्दा राम्रो नामले उपनाम "निदेशक"। हाम्रो आर्थर मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बोल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाताको मितिको अन्तराल सम्म। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवन तथ्याङ्कहरू वृद्धि गर्न समावेश छ। यसको अतिरिक्त, उनको बारे मा थोडा ज्ञात केहि दूर-रहित तथ्यहरु।
हो, सबैले उनको बारेमा जान्दछन् स्किमिम पास। तथापि, केवल केहि कम आर्थर मेलो जीवनी जो एकदम दिलचस्प छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
सुरू गर्न, उसका पूरा नाम आर्थर हेनिकिक रमोस डे ओलिवेरा मेलो हो। आर्थर अगस्त 12 को 1996th दिन मा उनको आमा, लुसिया डे मेलो, र पिता, एलिटन डी मेलो मा जन्मिए गोआनिया, गोआसा, ब्राजील।
फर्केर गएपछि आर्थरका आमाबाबुले रोमन क्याथोलिक परिवार र एक आरामदायक मध्य मध्यम वर्गको पृष्ठभूमिमा काम गर्थे। आर्थर मेलोको परिवार गोआन शहरमा आफ्नो पिताद्वारा स्थापित भएको थियो जुन देशमा सबै भन्दा कम संख्यामा बत्ती थियो। एलिटन डी मेलो सधैं एक कडा परिश्रम व्यक्ति भएको छ जसले आफ्नो परिवार र प्रियजनहरूका लागि प्रदान गरेको छ।
बढ्दै गयो, उनको सबैभन्दा असल मित्र सधैं पलिलो हेन्रीक नाउँ गरेकी एक युवती हो। पलो छोटो छ तर तिनको सेलिब्रिटी बच्चा भाइ भन्दा तीन वर्ष भन्दा पुरानो छ।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-क्यारियर बिल्डअप
धेरैजसो ब्राजिलका फुटबल खेलाडीहरूले आफ्ना युवाहरूमा गरेका थिए, आर्थरले ब्राजीलियन तर्कको खाली खाली सडक र कंक्रीट सतहहरूलाई पनि कल्पनात्मक फुटबल स्टेडियममा पछ्याए। शान्त छिमेकीको फाइदाहरू उनीहरूलाई मात्र दिएनन्, तर तिनका भाइ र साथीहरूले प्राय: प्रायः आफ्नो फुटबल खेल्ने क्षमता पाउँथे। आर्थर एक पटक आफ्नो शब्दमा भने;
"मेरो छिमेकी धेरै शान्त थियो, त्यसकारण मैले सडकमा खेलेका मेरा भाइहरू र मेरा मित्रहरूसँग, म तिनीहरूमध्ये अहिलेसम्म रहन्छु। मलाई सम्झना छ कि मैले यो न्यानोफुट गरे र त्यो धेरै पटक, मैले मेरो घुट्ने र ठूलो खुट्टालाई चोट पुर्याए। फुटबल सधैं मैले के गर्नु भन्दा बढी मनपर्छ। "
गोरखा फुटबल खेल्दै आर्थरको दिनमा, तिनका महान साथीले लडाइँमा सधैं उनको भाइ पालो हेन्रीक थियो। त्यस पछि, टोली आकार र रणनीति जस्तै केहि थिएन। यो सबै प्रविधिको बारेमा, चाल, शूटिंग, डर्बबलिङ र असामान्यता थियो।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- उनको क्यारियर कसरी सुरु भयो
आफ्नो जीवनमा प्रारम्भमा, आर्थर र तिनका भाइ पालोले निर्णय गरे कि उनीहरूले उनीहरूको सम्पूर्ण जवान जीवन फुटबलमा समर्पण गर्नेछन्, अरू कुनै क्यारियरको विपरीत। उनीहरुका छोराछोरीलाई सुन्नु भनेको उनीहरुका आमाबाबुको लागि कडा नट बन्नु भयो कि ब्राजीलियन फुटबल प्रतिस्पर्धाको कारण हो। आर्थरको आमाबाबु लुइसिया डे मेलो, र एलिटन, तथापि शिक्षा वा दुवैको संयोजनमा जोड दिए।
आर्थर आफ्नो आमाबाबुलाई समझाउन सक्षम थिए कि उनी आफ्नो शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्थे र अझै पनि पसीना बिना राम्रो खेलकुद प्रदर्शन पाउँथे। अन्तमा, तिनका आमाबाबुले तिनलाई र तिनको भाइ फुटबल खेल्नुभयो तर यो समय यो सबै औपचारिक रूपमा बनाइयो।
दर्ता:5को उमेर मा, लेखक को पिता एल्टन ले उनको भाइ पालो हेनरिक को साथ दर्ता गरे कि उनलाई नीलाटन मराला, एक आउटडोर फस्टल अकादमी संग लाया। दुई जना सधैँ सबै ठाउँमा सँगै गए तर अलग देखि खेले। जबरन 1996 सेट को लागि खेले, जबकि आर्थर 1993 सेट संग खेले। नील्टन मार्यभामा आफ्नो दिनको दौडान तल अर्थरको फोटो हो।
फुट्टल फुटबलको साथ आर्थरको सम्पर्कले उनलाई वास्तविक फुटबल प्रविधि प्राप्त गर्न सहयोग पुर्यायो। जब उनको भाइ पछि खेल मा रुचि गुमाए, आर्थर जारी भयो। आर्थरको मामलामा, बाहिरको ढोका फस्टल बढी थियो। डस्टबल्स, गतिशीलता र गेम भिजुअल प्रविधिहरू जुन फस्टलबाट सिके उनी फुटबल मोडललाई आधार बनाउँथे र उनी अहिले उडानको रूपमा व्यवहार गर्छन्।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- एक Goias बन्ने
आर्थरले तीन वर्ष बिताए निलोन मर्यभाषाको फुट्टल अकादमीमा फस्टलबाट सामान्य अकादमी फुटबलमा स्विच गर्न निर्णय गर्नु अघि। गोइसियसमा उनी सफल ब्राजिलको ब्राजिल शहरको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा सुन्दर फुटबल क्लब थियो।
Goias मा सहभागी मा बोलते हुए, आर्थर एक पल्ट भन्यो;
"यो मेरो बुबा थियो जसलाई मलाई प्रोत्साहन दिइयो किनकी मेरो लागि सबै धेरै चंचल थियो"
पहिलो पटक गोआसास शर्ट पहिरन लगाएर, यो थाहा भयो कि उनी आफ्नो सम्पूर्ण युवा जीवनलाई खेलमा समर्पण गर्नेछन्।
एक साथ खेल आर्थर को लागि एक आदत बनी हो किनभने उनी आफ्नो आयु समूह को सर्वश्रेष्ठ खेलाडी थिए। यसले उनको कोचलाई उच्च उमेरको स्तरमा प्ले गर्न स्वीकृत गर्यो। उनको गुणस्तरको लागि धन्यवाद, आर्थर खेले दुई युग कोटिहरूको लागि Goias संग। उहाँले ठूलो विरोध, ठूलो विरोधको साक्षी दिनुभयो र धेरै परिपक्व हुनुभयो। तल जङ्गल आर्थरको तस्बिर हो जब उनी लाइनअपमा सानो सानो खेलाडी थिए।
आर्थर को अनुकूलन र उनको टीम संग राम्रो तरिकाले क्षमता को आफ्नो आमा, पिता, रिश्तेदारों र मित्रहरु को वजन मा उपस्थिति द्वारा ईर्ष्या गरे जो उसलाई देखने को लागि उत्साहित महसूस गरे। आफ्नो क्यारियरमा शुरुमा, उनले शीर्षकहरू जिते।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- जोखिम र राइज उठाउँदै
आर्थरको बोकर आफ्नो बचपन ट्राफी जमघट पछि जारी राख्न जीते राख्न। यो भूखले उसलाई आफ्नो साँचो चरित्र मान्दथ्यो जसले असामान्य परिस्थितिको नेतृत्व गर्यो। आफ्नो क्लबको इच्छाको विरोधमा, आर्थर फस्टल क्लबबाट निजी निमन्त्रणा स्वीकार गर्दथे जसले टूर्नामेंट खेलको लागि उनको भाडा लिनेछ।
यद्यपि आर्थरले आफ्नो युवा फुटबललाई गोआसाको अन्तर्गत 11 सँग खेलेका थिए, उनले यी गोपनीय प्रस्तावहरू स्वीकार गरेका थिए जुन अनुकरण गर्दै थिए। उनको बुबाको अनुसार,
"यो अन्य टीमले उहाँलाई सोध्यो कि गोआसाको लागि केहि कुरा नगर्ने, आर्थर पहिले देखि नै 12 वर्ष पुरानो थियो र पहिले नै फेडरेशन गरिएको थियो"
गोप्य रूपमा अन्य टोलीले खेल्ने युवा अनुभवलाई धेरै अनुभव र थकान ल्यायो। आर्थर प्राथमिक टोलीको लागि अत्यन्तै अपरिहार्य हुन्थ्यो किनभने उनी आफ्नो आयु समूहको कप्तान हुन थाले। उहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्थ्यो कि उनीहरूलाई छोडेर खतरामा पर्दैन। आर्थर एकपटक तोक्ने बाँया हातसँग टूर्नामेंट प्ले गर्ने लाइनअपमा देखाइएको थियो (फोटो तल तल हेर्नुहोस्)।
पूर्व-क्यामेरा शटमा समाप्त भयो र गेम एक्शनले कप्तानको हातमा जवान कप्तानमा सबै क्यामेराहरूसँग सुरु गर्यो। आर्थर खेलमा सर्वाधिक प्रतिष्ठित र मनाईएको मिडफिल्ड प्रतिभा बन्नुभयो। खेलकुद प्रशंसकहरूको दुवै सेटले प्रशंसा गरेको हात बराबरी भए पनि बल र समय र ठाउँको साथ बुझ्नको लागि प्रशंसा गरिएको थियो।
टूर्नामेंट पछि, आर्थर परीक्षण निमन्त्रणा प्राप्त गरे। तिनको युवा क्यारियरको दौडान कप्तान आर्थर मेलो उनको नामको रूपमा चिनिने, उनीहरूको टोलीको रचनात्मकता ल्याइयो।
उनी गोआनिया शहरको सबैभन्दा राम्रो युवा फुटबलरको रूपमा हेरेर उनी धेरै सम्मानित थिए।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-युरोपेली फेममा उठाउनुहोस्
2010 को उमेर मा 14 मा, आर्थर ले निर्णय गरे कि त्यो सही समय हो कि उनको शहर छोडें। उहाँ तिनलाई पूर्णतया महासंघको खोजी गर्न र एक स्थानीय नायकको रूपमा जान्नदेखि बच्न खोज्नुभएको थियो। उनी गृहनगरले आफ्नो गृहनगरमा युवा टूर्नामेंटमा प्रदर्शनका पश्चात उनीहरूलाई हेरे।
आर्थर ले आफ्नो गृहनगर क्लब को सम्पूर्ण दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप मा गेरिमोओ को लागि तीसरा सबै भन्दा सुन्दर र सबसे मूल्यवान फुटबल क्लब (295.5 $ लायक $) को लागि छोडने को फैसला गर्यो।
ग्रीमीमा, आर्थर सबै जवान रैंका माथि उठ्यो र आफूलाई 2015 मा क्लबको वरिष्ठ पक्षमा पदोन्नति प्राप्त गर्यो। यो पनि एक समय थियो जब कुनै नाप हीरा उनको तब कोच द्वारा एक राष्ट्रीय तारा मा बदल्यो, रेनाटो गाउको.
आर्थर राम्रो प्रदर्शनको पङ्क्ति पछि पहिलो-तेस्रो टोली बन्नुभयो। ग्रेमिओमा, उहाँले 40 पासहरू बनाउने, एक प्रभावशाली 100% दर सफलता संग सबै को एक रेकर्ड बनाए। यो उनको Copa Libertadores को समयमा भयो।
यो भोजनालयले चेल्सी, बार्सिलोना र एथेट्टिको म्याड्रिड जस्ता युरोपियन क्लबहरूलाई आकर्षित गर्यो। यो पनि समय थियो युरोपेली क्लबहरूले उनको खेल शैली तुलना गर्न थाले एन्ड्रेस इनिस्टा र थियगो। बहुमुखी मिडफिल्डर ले उनको टीम को जीत को लागि नेतृत्व गरे Copa do Brasil 2016 मा, the कोप लिबर्टडोर 2017 र Recopa Sudamericana 2018 मा।
हरेक अन्तिम विजयी पछि मुख्य खेलाडीको रूपमा, आर्थरलाई "शीर्षक कलेक्टर"ती ट्राफिकहरू लिने आफ्नो अतीतको रेकर्ड थाह थियो। कोपा लिबरर्टडोर फाइनलमा, आर्थरले 94.8% पास सफलता हासिल गर्यो। केवल डेको यस उत्कृष्ट गुण प्राप्त गरेको छ।
समय बित्यो, आर्थरको शैली र अनुशासन उनको व्यक्तिगत ब्रान्ड भयो। यो एक समय थियो युरोप बाट फुटबल स्केट्स युवाहरु को लागि एक कदम बनाउन मा विश्वस्त भयो। युरोपको बीचमा, दक्षिण अमेरिकी क्लबहरूले फुटबल स्टारको खोजी गरे। आर्थरको बुबा, एिलटन, एक पटक सम्झिनुभयो;
"साओ पाउलो मलाई भनिन्छ, उनी आर्थर साइन गर्न चाहन्थे, "उनले सम्झन्छन्," तर Gremio उसलाई जाने छैन। "
रेनाटोको कोचको लागि, यो कुनै आश्चर्यचकित थिएन कि आर्थरको बिक्री केहि कुरा भयो जुन बोर्डको स्तरमा छलफल भयो। त्यो क्लबले ट्राफिकिङ सुरु गर्न थाल्दै जान्छ, ग्रीमियो बोर्डका सदस्यहरूले उनीहरूको सुनको अण्डाको रिलीज क्लियर बढाउने निर्णय गरे।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-एफसी बार्सिलोना प्लट
ब्राजिलमा गजमोयो सुपरस्टार मिडफिल्डर अर्र्थरको तस्बिर एक महान विनाशको साथ मनाएको बेला केही नोसहरू भन्दा बढी उनीहरूलाई बाहिर राखे। आर्थर बार्सिलोना शर्ट पहने तस्विरमा खेलिएको थियो जो आफ्नो क्लबको स्तरको विरुद्धमा छ।
उनको क्लब ग्रीमीले कुनै आधिकारिक भ्रमण पाएनन् तर कष्ट भयो एफसी बार्सिलोना द्वारा अन्डर कुरी र रोनाल्डिन्होको भाइ रोबेर्टो एसिइस। यो स्काउटिंग टोली उनी आर्थरको परिवारमा गएकी थिइन् र तिनीहरूलाई रातभरको लागि बाहिर निकाल्न।
तपाईंलाई थाँहा थियो?!! डिएगो एसिइस, रोबर्टो डे एसिजको छोरा र रोनाल्डिन्होभित्ता पनि फोटो मा उनको पिता को धन्यवाद मा देखा पर्यो जसले आफ्नो छोरा उनको प्रतिनिधित्व गरे। तस्वीर देखेर, फ्यानहरूले यो निष्कर्ष निकालेको थियो एफसी बार्सिलोना द्वारा स्पष्ट साजिश थियो Assis परिवारले जवानलाई आफ्नो क्लब छोड्न समझाउन। पहराहरू यो तेस्रो-पक्षका टोलीलाई फर्वार्ड वार्डको लागि वार्ता प्रस्तावहरू प्राप्त गर्न आर्थर जान्थे भन्ने केही प्रशंसकको लागि नयाँ थिएन।
Gremio Reaction: फोटो हेरेर बार्सिलोनाको बासिन्दाको आरोपमा एफआईएफलाई घटनाबारे जानकारी गराइएको छ। एक रिपोर्ट मा Grêmio को कानूनी सलाहकार नेस्टर हेन निम्न भन्नुभयो;
"यो जवान छोरी आर्थर हाम्रो खेलाडी हो। पुरा तरिकाले यो आर्किटेक्टेड थियो, त्यो दोषी छैन। मलाई भनिएको छ कि बार्काले आर्थर र तिनको परिवारलाई लंचन गर्न युरोपबाट सबै स्काउट पठाउनुभयो।
Grêmio उसलाई रोक्न रोक्न सक्दैन तर बरिका बच्चालाई प्रभाव पार्न प्रयास गरेर Grêmio संग समस्या सिर्जना गर्दैछ "
एफसी बार्सिलोना को लागि विजय: अन्तमा, गेमिओले दबाब दिएका थिए र उनीहरूका अन्तिम गहना खेल्थे एफसी बार्सिलोना जर्सी को रूप मा उनि Andreas आइसेस्ट को बदलन को लागि आश्वासन दिए थिए।
आर्थरको लागी, यो एक सपना सहि सत्य थियो किनकी उनि सधैँ बार्सिलोना खेलाडि बचाउनु पर्ने थियो। आर्थर क्लब द्वारा हस्ताक्षरित 34th ब्राजील बनने मा गर्व थियो।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-सम्बन्ध जीवन
आर्थरको सम्बन्धको जीवनलाई थाहा छ कि तपाईले उनको बारेमा पूर्ण तस्वीर निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ। ग्रेमिओमा आफ्नो वरिष्ठ क्यारियरको शुरुआती शुरुवात, आर्थर उनको सुन्दर प्रेमिकासँग भएको छ जसले नाम किला गार्सियामा जान्छ।
केलिया ब्राजिलको एक मोडेलको रूपमा चिनिन्छ। उनको प्रेमी प्रेमी एफसी बार्सिलोनामा स्थानान्तरण गरिरहेको छ भनेर निश्चित गरी उनी तयार हुन थालेको थियो, तर स्पेनमा उनलाई भेट्न ढिलाइ भएको थियो। केला गार्सिया उनको सुन्दर सुन्दरताको लागि धेरै राम्रो सराहना गरिन्छ जुन उनीहरुको सोशल मिडिया अकाउन्टमा अपलोड गरिएका सुन्दर फोटोहरूको लागि धन्यवाद। हामीले तिनका तीनवटा फोटोहरू तपाईंको हेर्दा खुशीको लागि पाएका छौं।
उनको अनुहार उपस्थिति देखि जुर्माना, आर्थर मेलो को प्रेमिका केइला गार्सिया शायद उनको मान्छे भन्दा 1 या2साल पुराना हुनु पर्छ।
निस्सन्देह, केइला सुन्दरताको पराजय हो जसले कक्षामा एफसी बार्सिलोनाको सङ्ग्रहको संग्रहमा ल्याउँछ।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन तथ्य
बन्द गर्दै, आर्थर मेलो सुन्दर छ। ग्वासियाको साथमा आफ्नो दिनदेखि निर्णय गर्दै, आर्थर मेलो सधैं प्राकृतिक जन्म भएको नेता हो। उहाँ कसैलाई हुनुहुन्छ जो आफ्नो जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा केहि हासिल गर्न सक्षम छ उसले आफूलाई प्रतिबद्ध गर्दछ। उहाँ सृजनात्मक, करियर भावुक, उदार र धेरै नम्र हृदय हुनुहुन्छ।
आफ्नो कैरियर कथामा फिर्ता हेर्न, आर्थर कुनै व्यक्तिलाई बेवास्ता गरेन र कठोर वास्तविकता सामना गर्नुमा समस्या छ। अधिक त, उनीहरूलाई राजाको रूपमा व्यवहार गरेन मन नपर्ने उहाँको आगोको तत्वसँगको धन्यवाद (एक लियो).
शैक्षणिक: सबैलाई थाहा छ फुटबलर तिनीहरूले पिच मा के गर्छन को लागि जान्दछन्। पिचमा उसले के गर्छ भने, लेखक पिच बाहिर बाहिरका शैक्षिकहरूको भूमिका उठाउँछन्। उसले अनलाइन अध्ययन गर्न समय पाउँदछ।
भावना ड्रेसिंग: आर्थर हट जम्पर पतलूनको प्रेमी हुन जान्छ। यो उहाँका खेलहरूमा लुगा लगाउनुहुन्छ।
आर्थर मेलो परिवार तथ्य: आर्थर मेलो को आमा लूसिया एक निजी चलाता छ twitter खाता आफ्नो छोरालाई समर्थन गर्न समर्पित।
आर्थरले आफ्नो प्रिय आमालाई आफ्नो प्रारम्भिक जीवन मार्फत आफ्नो प्रेम र शिक्षाको लागि प्रशंसा गर्न कहिल्यै बिर्सने छैन।
आर्थरको परिवारसँग उनी ब्राजीलियन टोलीसँग नजिकको सम्बन्ध छ नेमार.
ठूलो परिवार: आर्थरको ठूलो परिवार उनको नजिकको विस्तारित परिवारबाट बनेको छ, साथीहरु जसले आफ्नो एफसी बार्सिलोनाका अधिकतर टोलीहरूमा समेत समावेश गर्दछ Coutinho र Rafinha। समयिय समयमा, तिनीहरू सबै ब्राजिलका व्यंजनहरू छन् (Farofa, picana, churrasco, beans, etc.)
आर्थरसँग धेरै साथीहरू छन् उहाँलाई धन्यवाद उदार र वफादार। उहाँ मानिसहरूका विभिन्न समूहहरूलाई एकजुट गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
आइडल विवादास्पद: आर्थर मेलो उनको मूर्तिको तुलनामा मनपर्छ एन्ड्रियास इनिस्टा जसले 2017 / 2018 सीजनको अन्तमा Barca छोडे। यद्यपि, यो हुँदैन। बरु, उहाँ सधैँ मनपर्छ Xavi बिना अंक।
एफसी बार्सिलोनाले ग्रीष्मकालीन आर्थर मेलोमा निम्न खेलाडीलाई हस्ताक्षर गरे। तिनीहरू समावेश छन्; लरेन्टन ब्लान्क, फर्नांडो कटौटो, गियोभानो, लुइस एनरिक, जुआन पिज़ीजी, रोनाल्डो, हरिको स्टोचकोव र विटर बाय।
उनको सबैभन्दा खराब चोट: उनको बायाँ टाँटमा क्षति भएको कारण आर्थर एक पटक चार महिनाको चोट थियो। यो 2017 को Libertadores को फाइनलमा भयो।
अठारह मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो आर्थर मेलो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
लुकास मोरा बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य